Blogging for Business: Xeelado cusub oo loogu talo galay Eeyaha Duugga ah | Martech Zone
Blogging for Business: Xeelado cusub oo loogu talagalay Eeyaha Hore
Khamiis, Juun 24, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Qofna kuma doodi karo waxa jira xukunka blogs caan ahaanta iyo, markeeda, darajaynta mashiinka raadinta. Caan ka noqoshada baloogyadu waxay ka timaaddaa qaabkan cusub ee isgaarsiinta ee ku soo kordhay shabakadda - shaqsiyad badan, kafiir yar oo dhab ah.
Technorati ayaa daba socota 112.8 milyan oo blog xilligan oo kumanaan baloogyo ah la samaynayo saacad kasta. Codsiyada il furan sida WordPress, Blogger, ama Koodhadhka iyo Vox fududee baloog garaynta. Shirkad kasta, haddii aysan ahayn waax kasta oo IT ah, waxaad ka heli doontaa ugu yaraan hal qof oo wax ku qora. Way fududahay:
Qor + Faafi = Blog?
Waxay u egtahay mid fudud, sax? Taasi waa habka saxda ah ee lataliyayaasha suuq geynta loola dhaqmo markaan soo galno urur isla markaana ka wada hadalno blogging iyadoo qeyb ka ah istaraatiijiyad guud oo suuq geyn ah. Shirkaduhu waxay ka wada hadlaan blogging-ka sida waa shay ku jira liiska hubinta 2008. Weydii shirkad haddii ay wax ku qoraan oo aad hesho "yup" waajibka ah. Haddii aysan helin, weydii wejigii ay fiirinayaan oo ay ugu jawaabayaan mid ka mid ah “kuwa bilaashka ah”.
Ma sahlana sidaas
Haddii wax qorista shirkaduhu ay sahlanaayeen, maxay tirada blogyada hoos ugu dhacayaan? Waxaa jira sababo yar:
Wadahadalka caajiska ahi ma soo jiito akhristayaasha.
Blog-yada ganacsiga waxay isu beddelaan war-saxaafadeedyo dib loo soo cusbooneysiiyay.
Mawduucyada ma dhalinayaan faallooyin ama dib u socod.
Mawduucyada ayaa ka maqan shaqsiyad iyo hoggaamin feker.
Marka la soo koobo, sababta ay blog-yada ganacsiga u fashilmaan ayaa ah in shirkadaha ay ku beddelayaan dalab hubin ah nidaamka maareynta waxyaabaha ay ka kooban yihiin.
Ganacsiyadu Waxay U Baahan Yihiin Caawin!
Waxaa jira laba fure oo loogu talagalay qorista guusha ee ganacsiyada gebi ahaanba iska indhatiraan:
Madal taageerta istiraatiijiyadda.
Nin kasta oo IT ah oo leh wiqiyad macno leh ayaa ku tuuri kara WordPress server-ka wuxuuna siinayaa madaxa guud gelitaan. Tani waa hab dabka lagu hubiyo si loo hubiyo in bartaada ganacsiga ay cimri gaaban tahay. Waxay u egtahay inaad baxayso oo aad bilaabeysid ganacsi cawska maxaa yeelay waxaad ogaatay sida loo bilaabo milkiilahaaga cawska.
Helitaanka awood iyo natiijooyinka mashiinka raadinta waxay u baahan tahay falanqeyn aad u xeel dheer oo ku saabsan ganacsigaaga, tartamayaasha, joogitaanka webka ee waqtigan iyo meesha aad jeceshahay inay ahaato.
Hirgalinta barxad barta wax lagu qoro oo ku hagta blogger si hagar la’aan ah iyada oo loo marayo habka dhajinta, waxay ka caawisaa qoraa farsamo-yaqaan ah inuu soo saaro nuxur hagaagsan, ka dibna si otomaatig ah u abaabulo waxyaabahaas natiijooyinka raadinta ugu badan (oo lagu go'aansaday falanqeyntii hore iyo istiraatiijiyaddii) ayaa fure u ah guusha barta ganacsiga.
Blogging-gu maahan guul habeenki la gaaro. Natiijooyinka baloogyada waaweyn waxay u baahan yihiin dardar iyo falanqeyn joogto ah iyo horumar. Iyada oo la adeegsanayo baloog ganacsi, waxaan sidoo kale dhiiri gelin lahaa qaab kooxeed halkaas oo kooxdu ay hubiso in dadka ay ku fulinayaan istiraatiijiyad dhameystiran iyo jadwal.
Mawduucu ma wado mana ansixiyo Suuqgeynta. Haddii ay jirto a caajis wada hadalka in la yeesho, badanaa waxaa u sabab ah nadiifinta ka kooban walaalka weyn.
Istaraatiijiyad + Qor + Faafin + Dhiirigelin = Blog Blog!
Waan jeclahay WordPress iyo balooggan kama badali doono bartaas. Si kastaba ha noqotee, taasi micnaheedu maahan in WordPress uu yahay xalka ugu habboon. Shaashadayda 'Abuur Boosto Cusub', ma jiraan wax kayar 100 ikhtiyaar… tags, qaybood, xaalad, sooxirid, dib ufiirinno, faallooyin, pings, ilaalinta lambarka sirta ah, goobaha caadaysiga ah, xaaladda boostada, qoraallada mustaqbalka…. taahid. Ku tuur shaashadan qof kasta hortiisa waana xoogaa cabsi badan!
Meheraddaadu maahan inay baraan isticmaaleyaasha sida loo isticmaalo barxadda wax lagu qoro. Waa inaad awood u yeelatid inaad runti gasho, dhajiso oo daabacdo. U ogolow arjiga inta soo hartay!
Halkan waxaa ah hal tusaale oo ah muuqaal qurux badan oo aad ka heli doontid Compendium Blogware, aalad ka caawineysa qoraaga inuu xooga saaro ereyada muhiimka ah iyo weedhaha ku dhex jira qoraalkiisa si ay awood ugu yeelato in lagu soo qaado matoorada raadinta.
Haddii aad qorto wax yar ama aad u tiro badan ereyada muhiimka ah iyo weedho, dhibcahaaga ayaa hoos u dhacaya! Waa qalab yar oo soo jiidasho leh oo uu qoray saaxiibkiis, PJ Hinton. Qorayaasha waxaa lagula talinayaa inay wax u qoraan akhristaha, laakiin taas way ku guuleysan karaan iyo cufnaanta keyword weyn oo leh qalab xariif ah sidan.
Qalab sida Compendium wuxuu la yimaadaa koox xirfadlayaal ah oo kaa caawinaya inaad dhisto istiraatiijiyadda, iyo codsi kaa caawinaya inaad wax ku ool u noqoto istiraatiijiyaddaas. Oo xitaa uma baahnid in qofkaaga IT-ga ahi uu ku lug yeesho! Haddii aadan rabin inaad aragto baloogaga ganacsigaaga oo hoos u dhacaya tuubooyinka, raadi dadka saxda ah oo hel qalabka saxda ah ee lagu fuliyo.
Waxaan ku faraxsanahay booqashada kafeega ee aniga iyo Chris Baggott subaxaan (waxa uu ku dhajiyay baaritaanka Forrester ee ku saabsan baloog-dhigashada, sidoo kale.
Isku-darka is ka shaqeynta - uruurinta waxyaabaha ku jira iyo wadista taangiyada taraafikada ee ganacsiyada diiwaangashan. Akhristayaashu way mashquulsan yihiin wayna soo noqonayaan - ganacsiyadu way ka korayaan natiijooyinka. Waa xilli xiiso u leh shirkadda, isbedelada Compendium-na ay gabi ahaanba ka soo horjeedaan isbeddelladaas uu arkay Forrester.
Shaacin buuxda: Anigu waxaan ahay saamilay Compendium waxaanan lashaqeeyay Chris iyo Ali maalmihii hore. Compendium wuxuu ahaa aragti iyo wada hadal sabuudi ka dib, laakiin Chris iyo kooxdu waxay sheekadaas u badaleen shirkad weyn! Maaha aragti ahaan, waa codsi wax ka beddelaya hub-qorista ganacsiga.
Tags: blogging ganacsigablogging shirkadahafarsamo
A Masterpiece ee Isticmaalka iyo Naqshadeynta: Onehub
Jul 24, 2008 markay tahay 12:26 PM
Qoraal aad u fiican, Doug.
Baloogyada ganacsiga ayaa laga yaabaa inay hoos u dhacaan maxaa yeelay kuwa horay u korsaday waligood ma baran sida loogu beddelo akhristayaasha baloogyada macaamiisha, mushkilad ku dhacda bogagga intarnetka badankood. Hadda, waxay isku dayayaan qalab kala duwan.
Uma maleynayo in blogging-ka ganacsiga runti wali la tijaabiyay, ugu yaraan ma ahan shirkado badan oo ay u badan tahay inay ku guuleystaan. Taasi waa sababta oo ah u hoggaansamida waa arrin caynkaas ah.
Arrimaha u hoggaansamida ayaa ka ilaaliya qaar badan oo ka mid ah shirkadaha ugu fiican qorista. Shirkadaha dawladu waa inay aad uga taxaddaraan inay soo bandhigaan hadalo horay u socda oo ku soo jiidan kara maalgashadayaasha iibsashada saamigooda. Shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ay hogaaminayaan aragtiyaha (kuwa ugu fiican ee wax qora ee wax qora) ayaan diyaar u ahayn inay la wadaagaan hababkooda fikirka tartamayaasha.
Marka, yaa hadhay? Suuq geynta shirkadaha dadweynaha iyo shirkadaha heerka-dhexe ee aan ku filneyn inay bulshada u soo bandhigaan ama aragti dheer u yeeshaan inay adduunka wax ka beddelaan. Tani waxay u horseedaa blogs caajis ah oo ay ka buuxaan dammaanad shirkadeed iyo war-saxaafadeedyo.
Jawaabta? Hagaag, wali waan ka shaqeynayaa taas. Helitaanka dadka saxda ah ee wax ku qora ma sahlana. Laakiin markay bilaabaan, halkan waxaa ku yaal tilmaamo si aad ugu fududeeysid baloogleyda ganacsiyada inay dabku sii holcaan
1) hel xoogaa caawimaad ah. Maamulaha guud wuxuu noqon karaa ninka aad ka dooneyso khadadka baloogyada, laakiin uma badna inuu ka dhigayo mudnaanta. Qof kale masuul uga dhig si aad u hubiso in qoraallada la qoro oo la soo raro.
2) abuur jadwalka tifaftirka. Go'aanso waxa aad ka hadli doontid ka hor, sii mari kooxda sharciga ka dibna u oggolow qorayaashaada inay ka shaqeeyaan qoraalada.
3) qor waxa ay macaamiishaadu u baahan yihiin. Caajis ayaa ku jirta maskaxda akhristaha (ama isha qofka wax arka, ama wax jira). Haddii baloogga loogu talagalay in lagu daro qiime dhab ah rajada shirkadda, way fududaan doontaa in loogu beddelo akhristayaasha macaamiisha.
Waad ku mahadsan tahay markale qoraal weyn.
Jul 24, 2008 markay tahay 12:35 PM
Mahadsanid Rick! Talo bixin heer sare ah. Waad ku mahadsantahay waqtiga aad siisay arintaan - waxaa laga yaabaa inay u qalanto warqad cad, haa?
Jul 25, 2008 markay tahay 6:26 PM
Post weyn, sidii caadiga ahayd.
Laakiin waxaan rabaa inaan weydiiyo, sidee ku timid barashada qaabka Compendium ee aad iftiimisay? Macmiilkaagu ma isticmaalayaa? Mise qoraalkan waxaa kafaalo qaaday Compendium? Xaqiiqdii waxay u timid sidii ganacsi.
La soco inaanan ku eedeyneyn, xitaa haddii ay ahaan laheyd lacag bixin-boosto weli waan kaa fekerayaa, laakiin waxaan ahay qof aad u xiiso badan…
Jul 25, 2008 markay tahay 7:45 PM
Wax walwal ah malahan halkaa! Waxaan bixiyay waxoogaa shaacin ah dhamaadka boostada - waxaan ka caawiyay hormarinta asalka asalka ah ee Compendium Chris Baggott oo waxaan ahay saamilay ganacsiga.
PJ Hinton waa horumariyaha Compendium waana (waa wax iska yimid) sidoo kale waa 'fiend' kale Koobka Bean halka aan ku caweeyo. Waxaan kala hadlayey PJ fikradaha qaar ee ka caawinaya blogger-ka inuu qoro sida uu wax u qoro - PJ-na waxay i siisay aragti ku saabsan qaabkan aan wali la sii deyn.
Cali Sales ayaa la yimid fikradda waxaanan filayaa inay fiicantahay.
Jul 25, 2008 markay tahay 6:35 PM
Doh! Sababo jira awgood maan arkin qaybta “Shaacinta Buuxda”, waxaan ku aqriyay aqristahay RSS oo si uun baan u dhaafay. Waan ka xumahay qoraalka hore.
Jul 25, 2008 markay tahay 7:46 PM
Dhib malahan, Mike! Marwalba waan kula furnaan doonaa - waana qadarinayaa in laygu babac dhigo. Waxaan u maleynayaa inay tahay 'waajibaadkeyga' blogger ahaan. Haddii aan qoro erayada, waxaan sifiican u awoodaa inaan dib u taageero!
Jul 31, 2008 markay tahay 5:52 PM
Blogging-ku waa hab fantastik ah oo shirkadeed ay ku gaarto dad badan. Waxay u oggolaaneysaa shirkadda inay muujiso dhinac kale oo ka mid ah ganacsigooda. Intaa waxaa sii dheer, waxay ka caawineysaa kordhinta darajadooda mashiinka raadinta. Sababtoo ah baloog garaynta ayaa ah hab wanaagsan oo lagula xiriiri karo macaamiishaada iyo ballaarinta shabakaddaada bulshada, waxaad u baahan tahay inaad taxaddar muujiso oo aad la jaanqaadi karto balooggaaga.